Rugby – «Gold Top 8 Mada 2016» : hanohitra, hanala vela, amin’ny Zef’Be ny Tam Anosibe | NewsMada
Rugby – «Gold Top 8 Mada 2016» : hanohitra, hanala vela, amin’ny Zef’Be ny Tam Anosibe
Hifantoka, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara «Top 8 Mada », taranja rugby, ny sain’ny mpitia fanatanjahantena rehetra, amin’ity faran’ny herinandro ity. Hiditra an-tsehatra mantsy ireo ekipa 8 mendrika indrindra, eto Madagasikara.
Hanomboka rahampitso alahady, etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny fifaninanam-pirenena, eo amin’ny taranja rugby, na ny «Gold Top 8 Mada», sokajy Elite 1 D1. Hiatrika izany, ireo ekipa 8 sangany indrindra eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Avy hatrany dia samy hiditra an-tsehatra avokoa izy rehetra amin’ity. Tsy misy ankitsapatsapa na andraso andraso intsony ny fihaonana fa avy hatrany dia hangotraka satria ho ratsy toerana tanteraka, izay resy eto amin’ity andro voalohany ity.
Anisan’ny goavana amin’ireny, ny an’ny Tam Anosibe sy ny 3FB. Fihaonana hiendrika famaranana kely satria ireto ekipa roa tonta ireto, no niatrika ny manasa-dalana, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga. Hanala vela eto Anosibe, izay nanambara ny fahavononany hiatrika, ny klioban’ny minisiteran’ny fahasalamana. Efa nahazo tsapa sy traikefa tsara ireo boaikely, nosedraina tao amin’ny Tam ary tapa-kevitra fa hanohitra sy handavo an-dry José sy ry Tolotra ary ry Zo, amin’ity.
Ankoatra izay, ady tsy vita ihany koa ny an’ny Savony sy ny FTM (Dakar). Ekipa diso mifankalala tsara ny roa tonta, ary samy manana ny manavanana azy eo ambony kianja. Raha mampiasa “jeu de trois quart” ny Dakar, mitondra ny fanafihany amin’ny hazakazaka sy ny tositosika kosa ny Savony.
Adin’ny samy boaty, kosa, ny an’ny Cosfa (Bebaoty) sy ny IRC. Hanarina ny fahavoazany, amin’ity ny ekipan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Ny US Ankadifotsy (Tapany maintso) indray hiezaka hitelina ny TFA (Pilokely).
Nambaran’ny Malagasy Rugby, fa ireo mpitsara 20 mahay indrindra, taorian’ny fiofanana, natao, no hitantana ny lalao rehetra mandritra ity fifaninanam-pirenena ity.